Changzhou longxin Machinery Co. , Ltd မှ - ကြှနျုပျတို့အကွောငျး
Changzhou Longxin Machinery Co. , Ltd မှမှတ်ပုံတင်သန်း 30 ရန်ပုံငွေနှင့်အတူ 2001 ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ Changzhou မြို့အရှေ့ပိုင်းဆင်ခြေဖုံး Hengshanqiao မြို့၏မြောက်ဘက်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတဇုံမှာတည်ရှိပါတယ်ဌာနချုပ်, ကပေကျင်း-ရှန်ဟိုင်းမြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်း, ရှန်ဟိုင်း-နန်ကျင်းမြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်းနှင့်ရှန်ဟိုင်း-ချန်ဒူး Expressway ၏ကူးနီးစပ်သူဖြစ်ပါတယ်။ Longxin 13.600 စတုရန်းမီတာနှင့် ပတ်သက်. စုစုပေါင်းဧရိယာနှင့်အတူဓာတုစက်ပစ္စည်းကိရိယာများတစ်အထူးပြုထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်။
Longxin ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်မှု၏နှစ်ပေါင်း 20 ကျော် '' အတွေ့အကြုံကိုအတူနည်းပညာဆိုင်ရာသုတေသန, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းပေါင်းစပ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံအဓိကအားဖြင့် "Longxin" ထုတ်လုပ် & လက်စွဲသုံးလိပ်ကြိတ်, ဟိုက်ဒရောလစ်သုံးလိပ်ကြိတ်၏ "Huabao" အမှတ်တံဆိပ်စက်တွေ, ကွန်ပျူတာ CNC သုံးလိပ်ကြိတ်, ပုတီးကြိတ်, nano ကြွေသဲကြိတ်, ဂြိုဟ်ရောနှောစသည်တို့ကိုကျနော်တို့ကိုလည်းဒီဇိုင်းပေါင်းစပ်, တပ်ဆင်ရန်နှင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အတူဖောက်သည်ရဲ့တောငျးဆိုခကျြအရသိရသည်မြေတပြင်လုံးပြည့်စုံဆက်စပ်ထုတ်ကုန်လိုင်းညှိ။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်တွေကျယ်ပြန့်စသည်တို့ကိုမှင်, အပေါ်ယံပိုင်း, အီလက်ထရောနစ်ငါးပိ, ပိုးသတ်ဆေး, ပါဝါဘက်ထရီ nano ပစ္စည်းနေ့စဉ်ဓာတု, သားရေပလပ်စတစ်, ခဲတံ, အစားအစာ, ဆိုးဆေး, ဆီလီကွန်ရော်ဘာနှင့် guar သွားဖုံးအတွက်အသုံးပြုကြသည်
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအဘယ်သူသည်ရှယ်ယာကမ္ဘာတွင်အဆင့်မြင့်နည်းပညာကိုသင်နှင့်အတူကြိတ်နှင့်အရပ်ရပ်တို့၌ကွဲပြားနည်းပညာတစ်ခုပရော်ဖက်ရှင်နယ် R & D အသင်းကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းနှင့်အစဉ်အမြဲဒီစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများနှင့်တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဖိတ်ကြားချက်ကိုမူပိုင်ခွင့်5ပစ္စည်းများအပါအဝင်မူပိုင်ခွင့်လက်မှတ်များ၏ 20 ကျော်ပစ္စည်းများ, ရရှိရန်။ ကျနော်တို့ထုတ်လုပ်မှု၏ဖောက်သည်များ '' လိုအပ်ချက်နှင့်အညီပရော်ဖက်ရှင်နယ်စည်းဝေးပွဲကိုလိုင်းပေးနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အမေရိကန်, ဘရာဇီး, အိန္ဒိယ, ရုရှား, ဂျပန်, ကိုရီးယား, စင်္ကာပူ, အရှေ့တောင်အာရှနှင့်အခြားနိုင်ငံများနှင့်တိုင်းဒေသကြီးများမှတင်ပို့ခြင်း, အသက်ရှည်သမျှလူတန်းစားပေါင်းစုံကနေမြင့်မားတဲ့ဂုဏ်သတင်းကိုပျော်မွေ့နေကြသည်။
Changzhou Longxin Machinery Co. , Ltd မှအဆင့်မြင့်နည်းပညာလုပ်ငန်း, အလယ်ဗဟိုသုတေသနအမျိုးသားရေးအထူး Ultra-ဒဏ်ငွေအမှုန့်နည်းပညာ, Micro-nano ပစ္စည်းပြင်ဆင်မှုအင်ဂျင်နီယာနှင့်စက်မှုစမ်းသပ်ခြင်း site ကို, နှင့်တရုတ်မှင်ရေးအသင်း၏ဒုဥက္ကဌယူနစ်အပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောဂုဏ်ထူးဆောင်အခြေအနေ, ပိုင်ဆိုင်သည်။ 2018: Longxin စက်တွေTüV, BV, CE နဲ့ ISO09001 ၏အောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်နှင့်အတူဖြစ်ကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏တသမတ်တည်းနိယာမ "အရည်အသွေးပထမဦးစွာ Excellent ကဝန်ဆောင်မှု, Customer များစိတ်ကျေနပ်စေ" ဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးသားစွာကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်နှင့်အတူတကွဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ပြောင်ပြောင်တောက်သောအနာဂတ်ကိုဖန်တီးရန်မိတ်ဆွေများကအိမ်မှာနှင့်ပြည်ပနှစ်ခုစလုံးမှကြိုဆိုပါ၏!
တိုးမြှင့်အရင်းအနှီးနှင့် Longxin Machinery Co. , Ltd မှတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။
Longxin Hydraulic သုံးကြိတ်စက်စက်ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။
Longxin CNC သုံးကြိတ်စက်စက်နှင့်ပုတီးစေ့စက်ကိုတီထွင်ခဲ့ကြသည်။
နှစ်အလိုက် output ကိုသန်း 60 ကျော်တန်ဖိုးနှင့် Silicon စက်ယန္တရားနျဌာနခှဲတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။
Longxin စင်တာသုတေသနအမျိုးသားအထူးက Ultra-ဒဏ်ငွေအမှုန့်နည်းပညာဖြစ်ခွင့်အာဏာပေးခဲ့သည်။
Longxin အနာဂတ်တွင်ကြီးမားအောင်မြင်မှုရောက်ရှိ, ရှေ့ဆက်ဖို့ဆက်လက်။
တသမတ်တည်းနိယာမ: ပထမဦးဆုံးအရည်အသွေး, Excellent ကဝန်ဆောင်မှု, ဖောက်သည်ကျေနပ်မှု
ဖောက်သည် upmost, Excellent ကဝန်ဆောင်မှု
Longxin အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှဝန်ထမ်း "ဟုအဆိုပါစင်တာအဖြစ်ဖောက်သည်ယူပြီးနှင့်လမ်းပြအဖြစ်ဝယ်လိုအားကိုယူပြီး" ဖောက်သည်ရဲ့ဝယ်လိုအားကနေစတင်ဖောက်သည်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ထက်သာလွန်၏ဝန်ဆောင်မှုအယူအဆမှလိုက်နာရန်, လေးနက်ခြင်းနှင့်တာဝန်ရှိသဘောထားကိုနှင့်အတူဖောက်သည်ဆက်ဆံပါနှင့်နောက်ဆုံးတွင်ဖောက်သည်ရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှု ။ တိုင်းဖောက်သည်ပြီးနောက်-ရောင်းချခြင်းမှ pre-ရောင်းချမှုကနေကျနော်တို့ရဲ့ရိုးသားမှုခံစားကြပါစို့။
ကွိနည်းပညာအာရုံစိုက် Professional ကအဖွဲ့,
Longxin နှစ်ပေါင်း 20 ကျော်နေတဲ့သမိုင်းရှိပါတယ်။ ဒီအနှစ် 20 အတွင်းကျနော်တို့ပစ္စည်းကိရိယာများကြိတ်ပထမဦးဆုံးအတန်းအစားထုတ်လုပ်ကြောင်းရာတစျခုကိုအာရုံစိုက်ခဲ့ကြသည်။ ထိပ်တန်းထုတ်လုပ်မှုနဲ့ R & D ကိုအင်ဂျင်နီယာများ၏ဦးဆောင်မှုအောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြိတ်လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုများအတွက်အစိုင်အခဲအခြေခံအုတ်မြစ်ကိုတင်သောတစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ကြသည်။
Longxin အဆင့်မြင့်နည်းပညာလုပ်ငန်း, အလယ်ဗဟိုသုတေသနအမျိုးသားရေးအထူး Ultra-ဒဏ်ငွေအမှုန့်နည်းပညာ, စမ်းသပ်ခြင်း site ကိုအင်ဂျင်နီယာများနှင့်စက်မှု Micro-nano ပစ္စည်းပြင်ဆင်မှုအပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောဂုဏ်ထူးဆောင်အခြေအနေ, ပိုင်ဆိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှုနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုမှတဆင့် Longxin ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များကအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်မြင့်မားသောဂုဏ်သတင်းကိုရရှိခဲ့သည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်ကိုတည်ဆောက်နှင့်ငါတို့ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုချဲ့ထွင်ရန်ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။